असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला सभापति भेला बोलाएकै दिन देउवाले डाके बैठक - नेपालबहस
असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला सभापति भेला बोलाएकै दिन देउवाले डाके बैठक
| १६:३७:४३ मा प्रकाशित
३ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज देशैभरी विरोधसभाको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमनकै कदम भएको सन्देश दिएको छ । यद्यपि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने ओलीसँग समदूरी नै राख्दै सहकार्यको पक्षमा समेत तयार रहेको देखिन्छ ।
धेरैले कांग्रेसको अनिर्णय र अन्योलले नै ओली सरकारविरुद्धको आन्दोलन निर्णायक हुन नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । हुनपनि कांग्रेस मन वचनले सडक आन्दोनमा सरिक भएकै छैन । त्यसैले आज राजधानीमा भएको विरोधसभामा सहभागीको संख्या पनि पातलै देखिएको हो । देशैभरीको अवस्था यस्तै छ ।
सभापति देउवा कांग्रेस कुन बाटोमा जाने भन्ने विषयको छिनोफानो तत्कालै गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्टै छ । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वाेच्चले गर्ने निर्णय नै कुरेको बुझ्न सकिन्छ । सर्वाेच्चले गर्ने फैसलाका आधरमा अगाडि बढ्ने सोच देउवाको छ ।
यही कारण कांग्रेसको आगामी १४ औं महाधिवेशनसमेत अनिश्चित बनेको छ । आउने शुक्रबार अर्थात फागुन ७ देखि १० गतेसम्मका लागि महाधिवेशनको मिति तय भएको हो । तर तयारी भने शून्य छ । यसको मतलब निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेवाला छैन । केवल चार दिन बाँकी छ, तर निर्धारित महाधिवेशन स्थगित गरिएको छैन् ।
देउवा नयाँ मिति तोक्न इच्छुक छैनन् । उनी सर्वाेच्चको फैसलापछि मात्रै यसबारे निर्णय गर्ने पक्षमा छन् । सकेसम्म विघटन सदर होस् र चुनावमा जाने वातावरण बन्यो भने पार्टीमा आफ्नो हालीमुहाली बढ्ने र त्यसपछि महाधिवेशन गर्दा फाइदा पुग्ने अनुमान देउवाको छ ।
तर संस्थापन इतर पक्ष भने त्यो चाहँदैन । देउवालाई कमजोर बनाउन संसद् पुनस्थापना हुनैपर्ने उनीहरु चाहन्छन् । त्यसो हुँदा देउवा संसदीय प्रकृयामा व्यस्त रहने र आफूहरु महाधिवेशन केन्द्रित हुन बल पुग्ने बुझाई इतर पक्षको रहेको छ ।
त्यही लडाईंमा दुबै पक्षले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका घोषणा गर्न अनिच्छा देखाएका हुन् । राजनीतिक रुपमा देउवालाई दोषी देखाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले हिजो रणनीतिक निर्णय ग¥यो । सभापतिले कार्यसमिति बैठक नै नडाकी ६ महिना पदावधि थप्न लागेको भन्दै जिल्ला सभापतिको भेला बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
पर्सी फागुन ५ गतेका लागि भेला बोलाउने निर्णय भयो । तर यसैबीच देउवाले समेत अर्काे चाल चलेका छन् । उनले पनि जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएकै दिन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाकेका छन् ।
रणनीतिक रुपमा आफू बलियो बन्नका लागि कांग्रेसमा दुबै पक्षले चाल चलेका छन् । तर यसको छिनोफानो भने फेरि पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले मात्रै दिने देखिन्छ । यद्यपि पर्सी बस्ने कार्यसमिति बैठकले फागुन ७ गते महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै स्थगित गर्ने निर्णय चाहिं अवश्य पनि गर्ला ।
बिएण्डसी कलेज सम्बन्धनमा हस्तक्षेप भएको भनी आपत्ति ३२ मिनेट पहिले
ओलीले पदमा टाँसिएर गफ दिनु लज्जास्पद : पौडेल २२ घण्टा पहिले
कांग्रेस लुक्न मिल्दैन २४ घण्टा पहिले
नेप्सेमा वाणिज्य र विकास बैंकको शेयर सूचीकृत, कुनको कति ? ३ मिनेट पहिले
सत्तारुढ दलको सत्ताको झगडाले देश संकटग्रस्त : राप्रपा ५ मिनेट पहिले
नरहरिनाथको योगदान भावी पुस्तासम्म लगिनुपर्छ ७ मिनेट पहिले
दोभान आगलागीबाट भएको क्षतिप्रति भण्डारीद्धारा दुःख व्यक्त ११ मिनेट पहिले
दोभान आगलागीबाट ७९ घरपरिवार विस्थापित १५ मिनेट पहिले
गुल्मीमा बेपत्ता भएको १८ दिनपछि युवतीको शव फेला १८ मिनेट पहिले
चलचित्र मिररमा आर्यन र उपासनाको जोडि २३ मिनेट पहिले
बी एण्ड सी अब छिट्टै मेडिकल कलेज बन्ने : ओली २४ मिनेट पहिले
बिएण्डसी कलेज सम्बन्धनमा सरकारको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति ४६ मिनेट पहिले
चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरको उच्च माग, कति पुग्यो प्रतिशेयरमूल्य ? ४९ मिनेट पहिले
विप्लवले पनि गठन गर्यो प्रवक्ता प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता गठन ५१ मिनेट पहिले
चितुवाको आक्रमणबाट बचाउन मोबाइलमा अलर्ट म्यासेज ५५ मिनेट पहिले
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको ओलीले गरे उदघाटन ५६ मिनेट पहिले
विराट इन्स्टाग्राममा धेरै फलो गरिने खेलाडीको चौथो स्थानमा ३ घण्टा पहिले
सौर्य प्लान्टबाट १० मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडियो ६ घण्टा पहिले
नेपाल द्विपक्षीयस्तरमा सबै देशसँग मैत्री सम्बन्ध राख्न प्रतिबद्ध : ज्ञवाली १९ घण्टा पहिले
ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि होमस्टे सञ्चालन ४ घण्टा पहिले
आइतबारदेखि ५९ लाख कित्ता आईपीओमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने ९ घण्टा पहिले
सेवा प्रदानमा सहजता ल्याउन स्वयंमसेविकालाई साइकल वितरण ४ घण्टा पहिले
असिनापानी र रोगका कारण सुन्तला उत्पादनमा कमी ३ घण्टा पहिले
औषधि व्यवस्था विभागमा कार्यरत अधिकृत घुससहित पक्राउ ४ दिन पहिले
शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्दै महेन्द्रनगर ६ दिन पहिले
ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवासमा ५ दिन पहिले
सुनको मूल्य घट्यो,कति पुग्यो तोलामा ? २ दिन पहिले
सांसद यादवद्वारा कोन्हियामा नाला र ढलान सडकको शिलान्यास ५ दिन पहिले
राष्ट्रपतिद्धारा फागुन २३ गते संसद अधिवेशन आह्वान १ दिन पहिले
भारतमा पछिल्लाे २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट १२० जनाको मृत्यु ४ दिन पहिले
कांग्रेस अहिले हतारिएर सरकारमा नजाने : नेता सिंह ५ दिन पहिले
श्रोत नखुलेको २५ लाखसहित २ जना पक्राउ ६ दिन पहिले
प्रियंका र आयुष्मानले मनाए जन्मदिन र ‘म्यारिज एनिभर्सरी’ २ दिन पहिले
नर्भिक अस्पतालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ओपीडी संचालन १ हप्ता पहिले
अमेरिकी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्न बाइडेनद्वारा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर ५ दिन पहिले
प्रभु बैंकले जुम्लामा खोल्यो २१३ औं शाखा १ हप्ता पहिले
नाइजेरिया सडक दुर्घटनामा परी चारको मृत्यु, ४३ घाइते ४ हप्ता पहिले
प्रदेश र स्थानीय तह सरकारकै अङ्गमानेर काम गर्नुपर्छ; मन्त्री ठगुन्ना ४ हप्ता पहिले
रुकुममा जिल्ला स्तरिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न ४ महिना पहिले
विश्वभर काेराेनाबाट ६ लाख ७० हजारको मृत्यु ७ महिना पहिले
आजदेखि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ युरोप भ्रमणमा ६ महिना पहिले
दाउरा लैजाँदै बालिका ५ महिना पहिले